4 Izinto engifisa sengathi ngabe ngazi ngaphambi kokuqala ukuthi ngangihlukunyezwa ngokocansi. — Biologique
4 Izinto engifisa sengathi ngabe ngazi ngaphambi kokuqala ukuthi ngangihlukunyezwa ngokocansi.
isithombe kusuka ku-Unsplash
Angikhumbuli okokuqala ukuthi ngangihlukunyezwa ngokocansi; Kodwa-ke, ngiyazi ukuthi kwenzeke izikhathi ezingaphezu kwalokho engingathanda ukuthi kwenzeke. Ngasekuqaleni kweminyaka engamashumi amabili, nganginomqashi ongangibuza ngezinsuku futhi enze imibono mayelana nokuthi 'enhle' wayecabanga ukuthi ngingubani. Kwangenza ngingakhululekile kepha mina, njengabanye abantu abaningi abayisisulu sokuziphatha okunjalo, nganquma ukuthula ngethuba lokuthi ngingase ngilahlekelwe umsebenzi wami.
Muva nje, ngishiye i-yoga studio engangifundisa ngoba ngangihlukunyezwa ngokocansi. Labuyisa izinkumbulo eziningi zendlela lokhu okwenzekile ngaphambili futhi, isikhathi esiningi, nginguye kuphela owabambelela okulungile. Ngishiya kwakuyisinqumo engikwenzile ukuze ngibe nengqondo ecacile, ukuthula futhi ngingasabi yisisulu empilweni yami yansuku zonke.
Njengawo onke, angizisoli lutho kodwa uma ngabe ngingazitshela izinto ezimbalwa ngokuhlukunyezwa ngokocansi. Kungaba lokhu:
1. Iningi labantu ngeke likukholelwe ngenxa yezinkinga zabo.
Ngempela ngineqhaza lami elihle lomuntu ongathandeki wesilisa. Noma nini lapho ngikhulume ubunzima bokuthi lokhu kunakekelwa okungafuneki kuletha, ngiye ngahlangana nomuntu ',' akasho lutho olulimazayo 'noma,' okungenani ubonisa isithakazelo kuwe '. Zonke lezi zwi ziyangihlukumeza ngoba ngingaba nesithakazelo, angingeke ngikhononde ngakho. Ngeshwa, abantu abaningi bacindezelekile esikhathini esidlule. Bengathanda ukuba nomuntu omusha noma oguquguqukayo avaliwe ngaphandle kokwenza ushintsho oludingekayo ukuze sithuthuke njengomphakathi. Laba bantu banamathele futhi cishe bazohlala benamathela. Ungabhekeki kubo ububele noma umusa phakathi nalesi sikhathi esinzima, bheka phakathi noma phakathi kwabantu abakhathalela ngobuqotho ngawe kanye nenhlalakahle yakho.
2. Ungamangali lapho abantu bezama ukukutshela ukuthi uhlale uthule.
Emsebenzini wami wakamuva, ngivumela abaphathi bazi futhi, ngaphambi kokuba wazi, amatafula avuliwe kimi. Ngokungazelelwe ubuntu bomuntu ohlukumezayo behlehliswa ukungezwani nami ngigqoke kancane ngenkathi ngifundisa. Ngokweqile, indaba ejwayelekile yendoda ehlukumeza owesifazane, owesifazane okhulumela yena ohlangene nokuphikiswa okujulile. Ngaphambi kokuba wazi, amakilasi ami ayingxenye futhi abaphathi babengabe besakhuluma nami. Babefaka isimiso sokuthi ngihlale ngithule. Nokho, kimi, izwi lami libaluleke kakhulu kunekhokheji. Ngibonga ukuthi ngifundisa amanye ama-studios asekela, enomusa futhi angenzi iphutha lomuntu ukuthola ukunakwa okungadingeki.
3. Izwi lakho liphathelene nezindaba.
Ngasekuqaleni kweminyaka engamashumi amabili, ngangingakholelwa ngempela ukuthi izwi lami libaluleke kakhulu njengami manje. Kubalulekile ukukhuluma ngokuziphatha kwakho nokho indlela ozizwa ukhululekile ngayo. Uma singazizwa sikhululekile ngento ethile noma othile, kubalulekile ukusho okuthile. Yebo, ungase uzinakekele. Noma kunjalo, ungase ubeke abanye amandla okusebenzisana nalo muntu naye. Ungalindeli ukuthi omunye umuntu akhulume ngoba, ngaleso sikhathi, abantu abangu-50 bahlukunyezwa kungenzeka
4. Kungase kube nzima kodwa ukwenze njalo.
Ingxenye eyinkimbinkimbi kakhulu yokuma umhlabathi wami ukuthi abanye abantu engangibizile, 'abangane', babengikholwanga. Ukuntula kwabo ububele, umusa nokuqonda kungikhuthaza ukuqala kodwa kodwa ngabona lokhu njengesivivinyo somngani. Sonke singaba abangane uma sizijabulisa futhi sijabulela izikhathi ezimnandi kodwa, kuthiwani uma kufanele uvume ukuthi umngane wakho kungenzeka ukuthi udlule okuthile okukhudlwana kunalokho owafisa? Uyakholwa yini futhi ulalele? Noma, uzobahlulela futhi uthi bayakufisa lokhu?
Ungase uboniswe ukuthi abanye abantu bazakhela ukungaqiniseki kwabo kanye nokuntuleka kwekhono lokuzimela kuwe. Bavumele bahlole uhambo lwabo. Futhi, ngenkathi benza, qhubekela phambili ohambweni lwakho lobulungiswa nalokho okukholelwa ukuthi kungcono ngoba impilo yakho isesandleni sakho; hhayi abantu abafuna ukukuletha phansi futhi bakugcine ezingeni labo eliphakathi.
Newer PostThe Playlist of Hope: 10 songs to put you in a good mood.
Older Post10 inspiring quotes by Elon Musk